Ny herin'ny masoandro dia mbola foto-kevitra vaovao mahafinaritra ho an'ny olona maro. Ny mpanjifa mety misy dia hanana fanontaniana maro ka tokony ho vonona ianao hamaly am-pahatokiana ny fanontaniany rehetra. Ny fahatsapana voalohany voalohany mandritra ny fifampidinihana dia mety ho tsy fitovizan-kevitra eo amin'ny fahazoanao ny asa amin'ny mpifaninana. Ka ity misy torohevitra vitsivitsy momba ireo faritra ifotony izay tokony horesahanao sy ny mpanjifanao mandritra ny fivoriana consultation mpanjifa masoandro. Misy lohahevitra efatra tsotra sy mahitsy izay tsy maintsy resahina mandritra ny fifampidinihana mpanjifa masoandro. Ireo lohahevitra ireo dia Fa maninona ny masoandro no mandeha, Inona ny tanjon'izy ireo amin'ny herin'ny masoandro, Ahoana ny fahalalany, Inona ny teti-bolan'ny mpanjifa ary inona no azon'izy ireo hahazoana ny teti-bolany? Ankehitriny, andao isika hanao azy io.
Solombavambahoan'ny mpanjifan'ny Solosaina Lohahevitra # 1: Fa maninona ny masoandro no mandeha?
Ny valiny dia toa miharihary amin'ny voalohany- te-te hitahiry vola amin'ny volavolan-dalàna angovo izy ireo. Na izany aza, mazàna, ny antony manosika ny fisafidianana ny hanome ny masoandro any an-tranony. Miezaha hanana ilay tantara niaviany- Mahatsapa ho voafetsaky ny orinasan'ny herinaratra ve ry zareo? Nametraka rafitra herinaratra ve ny mpiara-monina na naman'izy ireo vao haingana? Mahazo famerenam-bola ve izy ireo sa fampindramam-bola manokana andoavambola? Moa ve izy ireo manandrana mampiakatra ny lanjany fananana hita maso? Mahatsiaro tena ve ny tontolo iainana? Ny fahazoana ny tantara dia manangana fifandraisana ary manampy anao hamolavola rafitra iray ao an-tsaina.
Solombavambahoan'ny mpanjifan'ny Solombavambahoaka Lohahevitra # 2: Karazan'asa inona no andrasany amin'ny rafitry ny herin'ny masoandro?
Ity faritra iray amin'ny dinika ifanakalozan-kevitra dia tena zava-dehibe satria mazàna, ny mpanjifa dia manana fanantenana tsy azo tanterahina momba ny herin'ny masoandro. Noho izany, mila manarona ny fototra rehetra ianao, dia: grid tie vs system-off, fitaovana ampiasain'ny rafitra, andro feno rahona, fahaiza-manao bateria ary fikojakojana ny bateria, famahana ny rafitra sy ny fahaverezan'ny heriny sns.
Ny fitsidihana lalina ao amin'ireny faritra ireny sy ny fampitana mivantana ny fahaizan'ny rafi-pahefana amin'ny herin'ny masoandro dia hanalavitra ny mpividy hanenina indray. Manoro hevitra ihany koa aho fa manolotra bokikely voasoratra miaraka amin'ireo valin'ireo fanontaniana napetraka matetika.
Solombavambahoaky ny mpanjifa an'ny masoandro # 3: Ohatrinona no fantatr'izy ireo?
Noho ny fampiasam-bola somary lafo vidy toa izao, azonao atao ny mamantatra fa nahavita fikarohana izy ireo. Koa aza manandrana mandefa zavatra ambany kokoa amin'ny mety ho mpanjifa- raha tsy hoe ny mpanjifa manokana dia mila zavatra mora vidy. Ahitana marika avo kokoa sy marika any amin'ny tsena. Raha miresaka mpamadika ianao, ny marika toa an'i Outback, Schneider sy Samlex dia raisina ho tena tsara. Raha ny bateria Rolls dia raisina ho fenitra volamena amin'ny fitahirizana bateria. Ny mpanjifa mandany vola amin'ity vola ity dia ny US 10,000 na ny mihoatra dia liana amin'ny kalitao.
Solombavambaran'ny mpanjifa an'ny masoandro # 4: Inona ny teti-bolan'izy ireo ary inona no azon'izy ireo?
Ny fifanakalozan-dresaka momba ny tetibola dia hamaritra raha afaka mividy ekipa premique ny mpanjifa.
11Nov Novambra 11, 2012
Ny tantarako diplaoma
Ny fianakaviako: Keith Bailey, Dorcas Bailey, Kimroy Bailey ary Lakeith Bailey Tamin'ny 3 Novambra 2012 Nahazo ny bakalorea aho tamin'ny ... hamaky bebe kokoa
Tao anatin'ny dimy taona nanoratana ny masoandro dia nahavita hadisoana be aho nandritra ny diako mankany ... hamaky bebe kokoa
28Feb Febroary 28, 2016
Angovo azo havaozina sy robotika afaka mampitombo ny toe-karena any Jamaika. Dimampolo taona nitombo 0-1% fitomboana no nanery ... hamaky bebe kokoa
20Oct Oktobra 20, 2012
Ny Dia tany Seattle
Jamaica, Miami, New York, Seattle ... Andro telo tamin'ny fanisana dia lanin'ny fifindra-monina, fifandraisana ary ny fiovan'ny toetr'andro. Ho ... hamaky bebe kokoa
11Jul Jolay 11, 2013
KB 100% Ivotoerana Community Community azo havaozina
Ny Kimroy Bailey Foundation dia nanambara ny tanjony hanatanteraka ny Ivotoerana Community Renewable 100% voalohany any Jamaica ao amin'ny vondrom-piompiana ambanivohitra ... hamaky bebe kokoa
25Oct Oktobra 25, 2016
MISY GRID rivotra sy ny fametrahana ny masoandro ary ny vidiny
Salama #TeamKB, amin'ity lahatsoratra Kimroy Bailey Renewables ity dia hampiseho fepetra tsotra dimy anao hametrahana ny anao manokana ... hamaky bebe kokoa